တိုက်ခန်း - မြေညီထပ်_အရောင်း_အငှား Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: မြေညီထပ်_အရောင်း_အငှား
#မလိခအိမ်ရာရှိ_မြေညီထပ်_အရောင်း_အငှားခန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ +++++++++++++++++++++++++++++++ 🏡 သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရတနာလမ်းမအနီး 🏡 မလိခအိမ်ရာ၊ မြေညီထပ် 🏡 အကျယ်အဝန်း(25´×35´) 🏡 1-Master Bedroom, 2-Bedroom. 🏡4Air con, ပါကေးခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး။ 💰 အရောင်းစျေးနှုန်း_၁၂၅၀သိန်း 💵 အငှားစျေးနှုန်း_၆သိန်း 📲📲📲📲📲 +++++++++++ 09-752 7575 47, 09-7789 69 226. 09-340 185 131, 09-250 998 522.